घरमा काम गर्ने युवतीद्वारा आत्महत्या, दुरुत्साहन मुद्दा लगाउने धम्कीपछि १५ लाख लेनदेनमा सहमति !::
घरमा काम गर्ने युवतीद्वारा आत्महत्या, दुरुत्साहन मुद्दा लगाउने धम्कीपछि १५ लाख लेनदेनमा सहमति !
कानुन भन्छ, ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ तर, के गर्दा दुरुत्साहन मानिन्छ भन्ने व्याख्या छैन ।१ भदौ ०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा पहिलोपटक आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दा समावेश गरिएको हो । तर, ऐनमा कस्तो अवस्थालाई आत्महत्या दुरुत्साहन भन्ने प्रस्ट व्याख्या नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ।
प्रहरीसमेत अलमलमा छ । आत्महत्या घटनामा जाहेरी परे मात्र मुद्दा दायर गर्ने नत्र चासो नदेखाउने, अनुसन्धान नगर्ने प्रहरीको कार्यशैली देखिएको छ । आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले संकेत गरेकै आधारमा निर्दोष पनि मुद्दाको झमेलामा परिरहेका छन् ।यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनाली र सन्तोष भट्टराईले लेखेका छन्।
दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका–१ सुस्पा क्षमावतीकी २१ वर्षीया सुनीता थामी चार वर्षदेखि काठमाडौं वसुन्धराका सुमित मैनालीकहाँ घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्थिन् । सुनीताको कामबाट मैनाली परिवार सन्तुष्ट नै थियो ।गत ११ जेठको बिहानै नियमित शारीरिक अभ्यासका लागि सुमित घरबाट निस्किए । सुमितकी श्रीमतीसहित सबै परिवार र सुनीता घरमै थिए । सुनीता घरभित्रै यताउता गर्दै थिइन् ।
तर, केहीबेरमै उनी गायब भइन् । घरका सदस्यले धेरैपटक बोलाउँदा पनि सुनीताको आवाज आएन । खोजीकै क्रममा सुमितकी श्रीमती कौसीमा पुगिन् । सुनीता त पानी ट्यांकीको रडमा झुन्डिएको अवस्थामा देखिइन् ।
सुमितका परिवारले तुरुन्तै प्रहरीमा खबर गर्‍यो । प्रहरी घटनास्थल पुग्यो, अध्ययन गर्‍यो । प्रहरीले सुनीताको परिवारका सदस्यको खोजी ग¥यो । परिवारका सदस्य नभई शवको सनाखत नहुने प्रहरीले बतायो । त्यसपछि परिवारको सदस्यको खोजी भयो ।
सुनीताका अभिभावक दोलखामै बस्थे । खबर पाएपछि काठमाडौं आए । सुमितको घरमा सुनीताका आफन्तको भिड जम्मा भयो । उनीहरूले हत्या भएको दाबी गरे । उनीहरू निरन्तर दबाबमा उत्रिए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गर्दा सुनीताको आत्महत्या नै भएको रिपोर्ट आयो । तर, सुनीताका आफन्त रिपोर्ट स्विकार्न तयार भएनन् । उनीहरूले सुमितलाई पक्राउ गर्न दबाब दिए । आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाअन्तर्गत सुमितविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिन गए ।
तर, घटनास्थलमा कुनै सुसाइड नोट नभेटिएका कारण प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन । तर, आफन्त झन् आन्दोलित भए । अन्ततः सुमितले सुनीताको परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति भराउनुपर्‍यो ।